Tuesday July 09, 2019 - 08:05:55 in Wararka by Super Admin
Qadar oo ah dal yar oo dhaca Jaziiradda Carabta ayaa hooy siisa ciidamada maryekanka kuwa ugu badan ee ku sugan meel ka baxsan dalkiisa.
Saldhigga Alcudeyd waa midka ugu weyn ee mareykanka ku leeyahay dibadda waxaana yaalla diyaaradaha ugu casrisan halka badda Qadar ay ku suganyihiin maraakiibta gujisyada mareykanka, Xukuumadda dabadhilifka Dooxa ayaa sanad walba Mareykanka siisa lacago boqolala milyan oo dollar ah taas oo qeyb ka ah dagaalka ka dhanka ah muslimiinta.
Tamiim Bin Xamad oo ah Amiirka Qadar ayaa sanad walba iska xaadiriya magaalada Washington si uu ucusboonaysiiyo ballanta kala dhaxaysa Mareykanka ee ku saabsan xoojinta dagaalka loogu magac daray Argagaxisa ladirirka oo ah xamlo ka dhan ah muslimiinta.
Donald Trump aya aqalka cad kusoo dhoweeyay hoggaamiyaha Qadar waxayna kawada haleen arrimo badan, Trump oo shir jaraa'id ay wada qabanayeen amiirka Qadar ayaa aad ugu amaanay sida xukuumadda Dooxa ay udhistay saldhigga weyn ee ciidanka Mareykanka iyo garoon ay ka haadaan diyaaradaha dagaalka mareykanka wuxuuna Trump Qadar ku sifeeyay saaxiib istiraatiiji ah.
Wuxuu carabaabay in dhismaha saldhigga iyo garoonka melleteri ee Alcudey ay ku baxday lacag dhan 8 Bilyan oo dollar dhammaan qarashkaasna waxaa dusha uridatay dowladda Qadar waana markii ugu horraysay ee Trump uu kashifo kaalinta ay xukuumadda Dooxa ku leedahay dhismaha saldhiggan weyn waxaana layaab leh sida dowladdan ay ubarbar taagantahay Mareykanka ayna isaga dhigto dowlad madax banaan.
labada hoggaamiye ayaa sheegay in kulankooda diirada lagu saaro shaqa wadaagga ka dhaxeeya ee dhanka dhaqaalaha iyo ammaanka waxayna falanqeeyayaashu sheegayaan in xukuumada Qadar ay daacad u tahay mareykanka balse ay kabiya diidantahay taageerada indha la'aanta dhanka siyaasadda ah ee maamulka Trump uu siinayo sacuudiga iyo imaaraatka carabta oo go'doomin sedax sana jirsatay kusoo rogay qadar.
Dawaaqiidda carabta gaar ahaan kuwa khaliijka ayaa ukala dhuumanaya lakulmidda sayidkooda Trump iyagoo kula saaxiibaya lacagaha ay ka boobeen shucuunta muslimiinta ee ay gumeystaan.